Toban (10) Talaabo oo kuu suuro Gelinaya in aad Farxad Geliso Xaaskaaga (Akhri) | shumis.net
Home » jaceyl » Toban (10) Talaabo oo kuu suuro Gelinaya in aad Farxad Geliso Xaaskaaga (Akhri)
Toban (10) Talaabo oo kuu suuro Gelinaya in aad Farxad Geliso Xaaskaaga (Akhri)
Rag badani waxeey hanan la yihiin quluubta dumarkoooda, ninyahow sow nacasnimo kuguma ahan in aad quluubta lamaanahaaga hanan waaysid waayo waxaan ognahay dumarka ineey yihiin naxariisle kuwa ugu naxariista badan ee dunida ku nool, waa hadii aad ula dhaqanto adigoo naxariis u muujinayo, teeda kale ma ogtahay dumarka wax ka xun ma jiraan hadii aad ula dhaqanto si xun, hadaba si aad naxariista iyo jaceylka lamaanahaaga u hanato isku day koow intaas in adiga lagaaa helo.
Waxaa jiro rag faro badan oo xaasas leh misena xaasaskoodii ayagoo jaceyl siin waayay dumar kale ku leh waan ku jeclahay, runtii waa arin aad u qadhaadh, ninyahoow isku day jaceylka inaad ka abuurto hooygaaga intaadan u gudbin hooy kaa fog, iskuna day inaad is dareensiiso wax badan oo kaa maqan.
Waxaa hubanti ah dumarka ninkeey ka dareemaan inuu yasayo ama uu iskala weynyahay in uu dhib iyo murugo badan kala kulmayo, waayo dumarka intooda badan waxeey ka simanyihiin wixii aay kaa arkaan ineey kugula dhaqmaan, sidaa awgeed u muuji jaceyl iyo kalsooni dhab ah, adigana halaguu muujiyeee.
Aan u daadago qodobo dhowr ah kuwaasoo kuu sahlayo inaad hanato quluubta xaaskaaga.
1- Isku day inaad lamaanahaaga dareensiiso ineey ku nooshahay nolol amaan ah, iyo inaad jeceshahay inaad daryeesho had iyo jeer, si adigana laguu daryeeelo.
2- Aragti walbo iyo subax kasto oo idiin dilaacaba ku salaan As-salaamu-alaikum wa rahmatullah waayo waxeey kaa haajirisaa sheydaanka.
3- Hadii aad damacdo inaad la taliso ama aad la hadasho si xanaaq ku dheehan hakula talin, meel aay dad ka muuqdaana hakula talin ama hakula hadlin, waxaad kula talisaa xiliga aay garabkaaga ku jiifto, weliba codka aad kula talineysid ha ahaado mid dagan, ayadana waqti u sii aay taladaada kaaga jawaabto, hanoqon mid hadalka iskaga dheeraado.
4,-Xaaskaaga u noqo mid deekhsi ah, haku noqon ama hakula dhaqmin sida aad ula dhaqanto dadyoowga kale ee aad macaamiiilka tihiin.
5- Ahaaw mid nadaafad badan, mida jirkaaga iyo mida gurigaagaba nadaafadooda ku dadaaal, iskuna day inta badan inaad ka caawiso howsha guriga, si aay niydeeda ugu degto, adigana aay kaaga caawiso howsha noloshaada.
6- xaaskaaga markaa baxeysid la dardaaran, si degan ugu sheeg tubada waji dhaqa, nalka guriga ku xiran, albaabaha iyo daaqadaha, I.W.M hadii aay halaabaan in aay adiga kula sugto oo aaysan ayada isku dhibin.
7- Hadalada naxariista leh ee kasoo burqanayo noqo mid Haa ugu jawaabo, markii arinkiina uu dheeraado muran idiin soo kala dhex galo isku day inaad sooo weeseysato oo aad tukato.
8- Markii aad u waceeysid xaaskaaga ugu wac magacyo macaan, isku day inaad u sameysato hal naaneys oo aad u macaan oo aad mar weliba ugu wacdid, taasoo idiin ahaato magac idiin sir ah..
9- Dareensii inaad ku faraxsantahay la noolaashaheeda, aayna kaa kaafisay baahi kasto, si aay kalsooni buuxdo kaaga hesho, garabkaagana aay ugu faanto.
10- Ku barbaari diinta caruurtaada hakuugu barbaariso diinteeee.
Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaaa, ee ninyahoow xusuusnoow qodobada lagu kasbado quluubta xaaskaaga aad beey u badanyihiin mar welibana isku day inaad fahanto quluubta xaaskaaga, qalbiga intaadan kasban waa inaa barataa wuxuu jeceylyahay iyo wuxuu necebyahayba.
Title: Toban (10) Talaabo oo kuu suuro Gelinaya in aad Farxad Geliso Xaaskaaga (Akhri)